Manchester City Oo Fasaxday 7 Ciyaartoy Oo Toure Ugu Horreeyo
HomeWararka MaantaManchester City Oo Fasaxday 7 Ciyaartoy Oo Toure Ugu Horreeyo
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa uu tababaraheeda Pep Guardiola go’aamiyey in oodda laga qaado oo ay kooxda ka tagaan toddoba ciyaaryahan oo uu tibaaxay in aanay waxba u taraynin.
Sida uu daabacay wargeyska The Sun ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska, ciyaaryahannadan oo udub dhexaad u ahaa koobabkii badnaa ee kooxdu qaadday sannadihii u dambeeyey, ayaa qandaraaska ay kula jiraan Man City uga hadhsan yahay min lix bilood.
Pep ayaa waxa uu doonayaa inuu dibu-habayn u gaar ah ku sameeyo City, si la mid ah kooxihii uu hore usoo maray ee Barcelona iyo Bayern Munich, waxaana uu isha ku hayaa dhawr ciyaaryahan oo xagaaga uu doonayo in kooxdiisu soo iibsato.
City oo toddoba dhibcood ka hoosaysa kooxda hoggaanka haysa ee Chelsea, ayaa waxa ciyaaryahannada ay fasaxayso ka mid ah goolhaye Willy Caballero, kaas oo inta badan ku qaata kursiga kaydka.
Difaacyahannada baasha midigta ee Pablo Zabaleta iyo Bacary Sagna ayaa iyaguna ku jira ragga uu sanifay Pep ee ka dhaqaajinaya garoonka Etihad.
Gael Clichy iyo Aleksandar Kolarov ayaa iyagana albaabka ay ka baxayaan la tusi doonaa.
Jesus Navas iyo Yaya Toure ayaa iyaguna ku jira liiska toddobada ciyaaryahan ee uu Pep Guardiola ka dirayo naadiga, halka Ilkay Gundogan oo dhowaan ay lacag badan ku bixisay City uu dhaawac daraadii muddo u jiifi doono, taas daraadeedna ay go’aaminayaan in la fasaxo.
Liverpool Oo Dhaafi Kari Weyday Plymouth
Isco Oo Dhaawac Halis Gaadhay, Muddo Dheerna Ka Maqnaanaya Garoomada
12/11/2017 Abdiwahab Ahmed
Manchester United oo kaalinta shanaad kala baxday Arsenal + Dagaalkii Garoonka Bannaankiisa Ee Ciyaartoyga
19/03/2017 Abdiwahab Ahmed